ဝေဒနာကို ပျောက်အောင် ရှုမှတ်ပုံ ရှုမှတ်နည်း – WunYan
” ဝေဒနာ ” အကြောင်းကို (၂ဝ၁၇ ဇန်နဝါရီလ ၊ ၂-ရက် ) တုန်းကတော့.. ” ဝေဒနာကို မနာအောင် ရှုနည်း “ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အပြင်၊ ” ဝိပဿနာနဲ့ ဆိုင်ရာစာစုများ ” ဆိုပြီး စာအုပ် ထုတ်ဝေတုန်းကလည်း ထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အပြင် အခြားပြည်နယ်တွေက မြို့ တွေကို ဖြန့် ဖြူးထားပေမယ့်လည်း၊ တစ်ချို့ ဝေးလံတဲ့ အရပ်တွေမှာ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စာအုပ်လက်ဝယ် မရရှိသူတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်တာနက် ဖေ့စဘုတ်က ဘာ အခက်အခဲ ဖြစ်လဲဆိုရင် ဖတ်ချင်တဲ့ စာမျက်နှာ ကို ရှာဖွေတဲ့အခါ ရေးထားတဲ့ စာစုတွေဟာ အဟောင်းစာမျက်နှာ ဖြစ်လေလေ၊ ရှာဖွေရတာ အချိန်ကြာလေလေ၊ ပြီးတော့..လောလောဆယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုတွေဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံက အင်တာနက်လို့မြန်ဆန်မှု မရှိလောက်သေးတဲ့အတွက် အခုလို ဖေ့စဘုတ်က စာမျက်နှာအဟောင်းကို ဖတ်ရှုတဲ့ အခါ မှာ ရှာဖွေရ ခက်ခဲမှု ကို ပိုပြီးကြုံတွေ့ ကြရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စာအုပ်လက်ဝယ်မရရှိဘဲ ပြန်ဖတ်ချင်တဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ တချို့ ကလည်း အသစ်ပြန်တင်ပေးဖို့ မေးလာတဲ့အပြင်၊ အခုမှ စပြီး တရားအားထုတ်မယ့် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်း မဖြစ်မနေ သိသင့်သိထိုက်တာမို့ အရင်က ရေးသားဖေါ်ပြဖို့ ကျန်ခဲ့တာလေးတွေကိုပါ နည်းနည်းဖြည့်စွက်ပြီး တရားစတင်အားထုတ်ကြတဲ့အခါ ဖြစ်လာမယ့်၊ ကြုံတွေ့ လာမယ့် ” ဝေဒနာ “ကို ပျောက်အောင် ဘယ်လို ရှုသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ” ဝေဒနာ.. ပျောက်အောင် ရှုမှတ်ပုံ ရှုမှတ်နည်း ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ အသစ် ထပ်မံရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခုမှစပြီး တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်၊ တရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်၊ လောလောဆယ်မှာတော့..စိတ်တွေကတော့ မငြိမ်ဘူး၊ တရားတွေ မတက်ဘူး ဆိုတာတွေထက်၊ အကျင့်မရှိဘဲ နဲ့ ခုမှစပြီး တရားအားထုတ်တဲ့သူကတော့ အရင်ဆုံး မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့ ရမှာက ” ဝေဒနာ “ပါ။
” ဝေဒနာ ” ဆိုတာ အလွယ်ဆုံးမှတ်သားချင်ရင်တော့ ” ခံစားမှု ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘာတွေ ကို ခံစားကြတာလဲ ဆိုရင် ကောင်းတာကို ခံစားချင်တယ်။ မကောင်းတာကို မခံစားချင်ပေမယ့် ခံစားရတယ်။ ” ကောင်းတာ နဲ့ မကောင်းတာ” ပေါ့။ တစ်ချို့လည်း နားလည်သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။ ပုထုဇဉ်တို့ အနေနဲ့ အများစု က “နာကျင် ကိုက်ခဲ” မှ “ဝေဒနာ” ဆိုပြီး မှတ်ယူနေကြသူတွေ များပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ” ဝေဒနာ “အကြောင်းကို အရင်ဆုံး အကြမ်းဖျင်းရှင်းပြပါရစေ။
ဝေဒနာက (၃) မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ ခံစားလို့ကောင်းတယ်၊ ကြိုက်တယ်ပေါ့ ၊ အဲဒီလို ခံသာတဲ့ “ဝေဒနာ”ကို “သုခဝေဒနာ”လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၂။ ခံစားလို့ မကောင်းဘူး၊ မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ အဲဒီလို မခံသာတဲ့ “ဝေဒနာ” ကို “ဒုက္ခဝေဒနာ”လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၃။ ခံသာတာလဲမဟုတ်ဘူး၊ မခံသာတာလဲမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ဝေဒနာ ကို “ဥပေက္ခာဝေဒနာ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
နာတဲ့ ဝေဒနာ ကို ပျောက်နေအောင် ဘယ်လိုရှုမှာလဲဆိုပြီး ဖေါ်ပြမှာ ဖြစ်လို့ အဲဒီ ” ဝေဒနာ” သုံးမျိုးထဲက ” ဒုက္ခဝေဒနာ ” အကြောင်းဘဲ လောလောဆယ် ပြောပါရစေ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အထက်မှာ ရေးပြသလို၊ တရားအားထုတ်ကြသူတိုင်း ကြုံတွေ့ ကြရတာ၊နာကျင် ကိုက်ခဲ တဲ့” ဝေဒနာ” ပါ။ နာကျင် ကိုက်ခဲတာ ကို အများစုက ကြိုက်မှ မကြိုက်ကြတာကိုး။ ဒီဝေဒနာ က ပိုပြီး သိသားလွန်းတဲ့အတွက် ဓမ္မမိတ်ဆွေ တို့ ဟာ “ဝေဒနာ” လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အဲဒီ “ဒုက္ခဝေဒနာ” ကြီး ကို ပြေးပြေးမြင်နေကြပါတယ်၊ တရားအားထုတ်တဲ့ အခါ အဲဒီဝေဒနာ ပေါ်လာမှာ ကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်၊ ခန္ဓာ ရှိသ၍ “ဝေဒနာ” က ပေါ်တာ ဓမ္မတာတရားပါ။
မိမိတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင်တောင် ပျောက်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ကုသပေး၊လုပ်ပေးနိုင်တာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ရှာတွေ့ ထားတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ “ဗုဒ္ဓတရားတော်” တွေကသာ အဲဒီ ” ဝေဒနာ ” ကို ကုစား ပေးနိုင်တာပါ။
“ဝေဒနာ လာသေးလား ” ” ဝေဒနာချုပ်သွားပြီလား”၊ “ဝေဒနာ” ၊”ဝေဒနာ”ဆိုတဲ့ ဒီစကား ကို တရားအား ထုတ်ဖူးသူတိုင်း တရားစခန်းတိုင်းမှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အချင်းချင်း တရားဆွေးနွေးကြတဲ့ အခါ မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တရားနာကြားတဲ့ အခါတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြဲကြားရတဲ့ စကားလုံးဖြစ်နေပါတယ်။ နာကျင်တာကို ပဲ “ဝေဒနာ” လို သတ်မှတ်ကြတာကိုလည်း အပြစ်လို့ မပြောလိုပါဘူး၊ ခုနပြောသလို နာကျင်တာက ထင်ရှားနေတာကိုး။
တစ်ချို့ က ” ကျနော်ဗျာ.. နေ့ တိုင်း ( ၁ )နာရီ အချိန်မှန်မှန် မကွက်မပျက်တရားအားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆို ကျနော့်မှာ ဝေဒနာ ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး” တဲ့။ တစ်ချို့ ကျပြန်တော့လည်း “ကျွန်မ ဝေဒနာ ချုပ်သွားပြီ။ အရင်က တရားထိုင်ခါစမှာ အရမ်းကိုသေချင်လောက်အောင် နာပါတယ်။ ဝေဒနာ ပေါ်လာလို့ မှတ်ရင်းမှတ်ရင်း နဲ့ အခု ဆို တရားထိုင်တိုင်း အဲဒီဝေဒနာ မလာတော့ဘူး”..တဲ့..၊ “ဝေဒနာချုပ်” သွားပြီတဲ့။
ဒီလိုရှိပါတယ် ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် လူတစ်ယောက်ဟာ အပြေးလေ့ကျင့်တယ် ဆိုကြပါစို့။ လေ့ကျင့်ခါစမှာတော့ အလေ့ကျင့်မရှိယင် ( ၁ဝ )မိနစ်လောက် ပြေးရင် လည်း မောပါတယ်၊ အမောမခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ နေ့ တိုင်း ပုံမှန် လေ့ကျင့်လာတဲ့ အခါ ကြာလာတော့ ( ၁ )နာရီ၊( ၂ )နာရီကြာ ပြေးရင်တောင် မှ အမောခံနိုင်လာတာကို တွေ့ ရမှာပါ။ ဒါက ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ “အလေ့အကျင့်”ပါ။ ဒီလိုပါဘဲ တရားထိုင်ခါစ မှာ အလေ့ကျင့် မရှိတော့ နာလာ၊ကိုက်ခဲလာတယ် ဆိုတာ မဆန်းပါဘူး။ ဆန်းတယ် ဆိုတာက အဲဒီ နာတာကိုက်ခဲတာ ကို ရှုနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ “ဝိပဿနာဉာဏ်”ဘဲ။ ယောဂီ အနေနဲ့ ခုလို နေ့စဉ် ( ၁ )နာရီ၊ (၂ )နာရီ ပုံမှန် တရားထိုင်လို့ ” ဝေဒနာ ” မလာတော့ဘူးဆိုတာ မဆန်းပါဘူး။ဒါ အကျင့်ဖြစ်သွားပြီကိုး။ မနာတော့ဘူး ဆိုရင်..ထိုင်နေကျ အချိန်ထက် နည်းနည်း လောက် အချိန်ပိုပြီးထိုင်ကြည့်တဲ့အခါ..ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာတွေဟာ ထပ်ပြီးပေါ်လာပါမယ် ဆိုတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာ ရှိရင် “ဝေဒနာ”ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဝိပဿနာဉာဏ် အားမပြည့်သေးဘဲနဲ့ဟိုတွေးဒီတွေး နဲ့ အတွေးချော်နေမှာ စိုးလို့ သတိပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” ဝေဒနာ” ရှိတာကို သိနေရပါမယ်။ အဲဒီပေါ်လာတဲ့ ဝေဒနာ ကို ကိုယ့်အနေနဲ့ ခံနိုင်အောင် ရှုနိုင်တာကမှ ” ဝေဒနာကို နိုင်တယ် ခေါ်တာ ဝေဒနာချုပ်တယ်” လို့ ခေါ်တာပါ။ တစ်နေ့ လုံး မထဘဲ ထိုင်ကြည့်လိုက်ပါ၊ အဲဒီ နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာ ဟာ ပေါ်လာလိုက်၊ သူဟာသူပျောက်သွားလိုက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်နေမယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ သဘာဝတရားပါ ကိုယ်လုပ်ယူနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁။ ဝေဒနာကို ပျောက်သွားအောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ ရှုတာရယ်၊
၂။ ဝေဒနာကို အပြုတ်တိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကြမ်းကြီး နဲ့ ရှုတာရယ်၊
၃။ ဝေဒနာကို သိအောင် ရှုတာရယ် ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
ပထမနည်း နဲ့ ဒုတိယနည်းက ….. ပယ်ရမယ့်နည်းပါ။
ဝေဒနာကို ပျောက်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ မရှုပါနဲ့။ သူများတွေ ဝေဒနာ ကျော်သွားတယ်၊ ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်း ပျောက်ချင်၊ ချုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီစိတ်နဲ့ရှုရင် မှတ်ချက်တိုင်းမှာ ဝေဒနာပျောက်ချင်တဲ့ “လောဘ” ပါနေတယ်။ ဒီ ဝေဒနာ ပျောက်ချင်စိတ်ကြီး နဲ့ ရှုနေတော့ လောဘ ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ တချို့ကျတော့လည်း ဒေါသ သမားက ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလောက်တောင် နာတဲ့ဟာ ကို အပြုတ်တိုက်မယ် ဆိုတဲ့ဒေါသကြီး နဲ့ ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီဒေါသကြီး နဲ့ လည်း ရှုမှတ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဝိပဿနာ ရှုတယ် ဆိုတာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကုန်အောင်၊ ပါးအောင် လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် လောဘ၊ ဒေါသကြီး နဲ့ ရှုရင်တော့ ရှုနည်းမှားပါတယ် လို့ ပဲ ဆိုရမှာပါ။
အဲဒါကြောင့် “ပျောက်ချင်တဲ့..စိတ်ကြီးနဲ့ မရှုပါနဲ့” တဲ့။ “အပြုတ်တိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးနဲ့ မရှုပါနဲ”တဲ့။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ “ရှုမှတ်”ရမလဲဆိုရင် ဝေဒနာကို ” သိအောင် “ရှုရပါမယ်။ ” ဝိပဿနာ ” ဆိုတာ “ ရုပ်တွေ နာမ်တွေရဲ့သဘော ” ကိုသိအောင်လုပ်တာပါ။ လှုပ်ရှားနေတာတွေ၊ မာတာ ပျော့တာတွေ၊ ပူတာအေးတာတွေက “ရုပ်တရား “။ အခုခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကနာမ်တရားတွေ။ အဲဒီ နာမ်တရားဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာ တို့ ၊စိတ်တို့ရဲ့သဘောကို ဝိပဿနာဥာဏ် နဲ့ ရှုမှတ်နေရတာပါ။
” ချမ်းမြေ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ” ဟောကြားတဲ့ ဝေဒနာရှုတာကို ( ၃ ) မျိုးခွဲပြီး
၂။ ရန်သူကို ချုံခို တိုက်ခိုက်နည်း။
၃။ ရန်သူကို အချော့သတ်နည်း..ဆိုပြီး ဟောထားတာရှိပါတယ်။
*လူငယ် ၊ လူရွယ် တွေ အသက်ငယ်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ လူတွေ အတွက် ကတော့” ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နည်း “က ကောင်းပါတယ်။
*ရောဂါရှိတဲ့သူ၊ ဥပမာ-နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူ ဆိုရင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်နည်းကကောင်းပါတယ်။ “ ချုံခိုတိုက်ခိုက်နည်း” က ကိုယ့်ရဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ကို များများမှတ်ပြီး၊ နောက်မှ…ဝေဒနာ ကို ပြန်ရှုတာ။ ဒါက “ ချုံခိုတိုက်ခိုက်နည်း”ပါ။
*အင်မတန်အသက်ကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကတော့ မှတ်နေကျ ပင်တိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်း ကို အကြာကြီး မှတ်၊ မခံမရပ်နိုင် နာကျင်လာရင် ၊ထိုင်တဲ့ ပုံစံလေး ကို အသာလေးပြင် နောက်မှ ဝေဒနာကိုရှု။ အဲ့ဒါ…”အချော့သတ်နည်း”ပေါ့။
“ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နည်း” ဆိုတာ ဝေဒနာ အပေါ်စိတ်ကိုတည့်တည့်မှတ်မှတ်ထားပြီး၊ နာတဲ့အပေါ် စိတ်ကိုတည့်တည့်ထားပြီး “ထိုင်တယ်၊ ထိတယ်၊ နာတယ်”…. “ထိုင်တယ်၊ ထိတယ်၊ နာတယ်”-လို့ စူးစူးစိုက်စိုက်မှတ်။နာတာ ကျဉ်တာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သည်းညည်းခံပြီး မှတ်တာပါ။ ပေါ်လာတဲ့ ဝေဒနာတွေက ဒုက္ခသစ္စာ။ ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်နေတာက မဂ္ဂသစ္စာ။ အပါယ်လေးပါးမကျအောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာ ကိုသိဖို့ အတွက် ဝေဒနာ ကို ရှုမှတ်တာ က ပိုပြီးထိရောက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဝေဒနာ၊သတိ” ဆိုတာ နာရင် နာတယ်လို့မှတ်တာ။အဲဒီလို နာတာကို မှတ်နေရင်း ” သတိ “က အားကောင်းလာပြီး ” ဝေဒနာ၊ သမာဓိ “ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီ ဝေဒနာနဲ့သမာဓိ ဘောင်ချိန်လိုက်ရင် “ပညာ”ပေါ်လာပါတယ်။ ” ဒုက္ခဝေဒနာ “ကို ကျော်လွန်အောင် မမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ ၊ တရားထူးရဖို့တော်တော်လေး ကျင့်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နည်းတော့…. မြန်မြန်ဆန်ဆန် တရားသဘောတွေ မြန်မြန် ပိုသိနိုင်တာပေါ့..နော်။ အဓိက က .. နာလာတဲ့ ဝေဒနာ ကို သဘောပေါက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့“ရောဂါ ကြောင့် နာတာလား ၊ ဝေဒနာ” ကြောင့် နာတာလား ဆိုတာကို ကွဲပြားအောင် ကြည့်ရပါမယ်။ ကိုယ်ထဲမှာ “နာတာ၊ ကျင်တာ၊ ကိုက်တာ၊ ခဲတာ” အဲဒါက ” ရောဂါ ” ပါ။ အဲဒီ ကိုယ့် အနာရောဂါ ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ မခံသာတာ ကတော့ “ဝေဒနာ(ခံစားချက်)” ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဖောက်ပြန်တဲ့ ရောဂါကိုဘဲ”နာလှချေ” ရဲ့ ဆိုပြီး ကြည့်နေရင် သိပ်အခံရ ခက်ပါတယ်။ “စိတ် “ထဲ မှာ ရှိနေတဲ့ အဲဒီ “မခံသာတဲ့” ဝေဒနာ( ခံစားချက် )ကို ကြည့်ပေးပါ။ “မခံသာတဲ့ ဝေဒနာ”က သပ်သပ်။ “ရောဂါ”က သပ်သပ်…ဆိုတာ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ မခံသာတဲ့စိတ် ကို ရှုကြည့်နေလိုက် ရင် တော့ “ကိုယ်မှာနာနေတာ” ဟာ မဆိုင်တော့ဘူး.. ဆိုတာ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ သူများဖြစ်တာလေး ကို ကြည့်နေရသလို၊ ဆရာဝန်က လူမမာ ကို ကြည့်နေရသလိုပါပဲ ကိုယ်ပါရောပြီး မနာတော့ပါဘူး။ ကိုယ်နာတာချည်း သွားကြည့်နေရင် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရောပြီးနာသွားပါလိမ့်မယ်။ “မခံနိုင်ဘူး။ ပြင်ချင်တယ်။ ပြောင်းချင်တယ်” အဲဒီ စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်လည်း..အဲဒီဖြစ်တဲ့ စိတ် ကို “သိ” နေပေးပါ။ ပျောက်ချင်စိတ် ဖြစ်နေရင်လည်း အဲဒီ”စိတ်ကလေး”ကို ဘဲ သတိထားပြီး ကြည့်ပေးပါ။ မကျေနပ်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်း ကြည့်ပေး၊ သိပေးပါ။
ဥပမာ တစ်ခုထပ်ပေးရရင်တော့ မီးဖိုပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ ဟင်းချိုအိုး က ဟင်းချို ကို “အပေါ့ အငန်” ကို မြည်းသလိုပါဘဲ။ အဲဒီလို “အပေါ့ အငန်” ကို မြည်းတဲ့ အခါမှာ မီးဖိုပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဟင်းချိုအိုး ပွက်ပွက်ဆူနေတာကို ပူမှန်း သိလျက်….ဇွန်း နဲ့ ခပ်ပြီး မြည်းကြတယ်…မဟုတ်လား။ ဘာလို့ ပူမှန်း သိသလဲ ဆိုတော့ မှုတ်ပြီး သောက်ကတည်း က “ပူမှန်း” သိလို့ ပါ။ အဲဒီလို ဟင်းရည်အပူကြီး ပါးစပ်ထဲကို ရောက်တဲ့အခါ “ပူတာကို အာရုံပြုကြ တာလား” “အပေါ့..အငန် ကို အာရုံပြုကြ တာလား” ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ..”ပူတာကို သတိမထားကြပါဘူး ဂရုမစိုက်ပါကြဘူးနော်။ “အပေါ့အငန်”ကိုပဲ သတိထား ကြပါတယ်။ “အပေါ့အငန်”ကိုပဲ အကဲခတ် ကြပါတယ်။
အဲဒီဥပမာ တွေလို ပုထုဇဉ်တွေဟာ အများအားဖြင့် နာတာ၊ကျင်တာကြီး ကို ဂရုစိုက်၊ ကိုက်တာ၊ခဲတာကြီး ဂရုစိုက်နေကြတာဘဲ များကြပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ဂရုမစိုက်ပါ နဲ့။ “အပေါ့အငန်”နဲ့ တူတဲ့ ” မခံချင်တာကို ခံစားနေရတဲ့ စိတ် ” ကလေးကို သာ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ နာကျင်တဲ့..အပေါ်မှာ ခံစားတယ်၊ ကိုက်ခဲနေတဲ့ အပေါ်မှာ ခံစားတယ်။ ခံစားတာ “ဝေဒနာ” ကိုး။ အဲဒီ” ဝေဒနာ” အပေါ့အငန် ကိုသာ ကိုယ်က အကဲခတ် ဖမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို မဖမ်းဘဲ နဲ့ အပေါ့ အငန် နဲ့၊ ငါ နဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ပူတာကြီး အာရုံပြုပြီး၊ ဒီပူတာကြီးကို ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဟင်းချို ” အရသာ ” ကို မသိတော့ဘဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဟင်းချို ကို အရသာ မြည်း သလို…ပူတာ ကို ဂရုမစိုက်ရပါဘူး။ အပေါ့အငန် ကို ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ နာကျင်၊ ကိုက်ခဲတာကြီး ပေါ်လာတယ်။ ပေါ်လာတဲ့ နာကျင်၊ ကိုက်ခဲတာ ကို “ပဓာန” မထားပါနဲ့။ “ သာမည ” ထားပါ။
အဓိက က ဘယ်သူလဲ၊ နာကျင်၊ ကိုက်ခဲတာ အပေါ်မှာ မခံချင်တာ ခံစားနေရတာ။ အဲဒီ ခံစား နေရတဲ့ “သဘော” ကသာ… “အဓိက” ဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်၊ ကိုက်ခဲတာဟာ “သာမည ” ပါ။ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ” ဝေဒနာ” ခံစားတဲ့ သဘောကို ရှုချင် ရင် “ ဟင်းရည် မြည်းသလိုပဲ ” ရှုတာဟာ အဆင်ပြေဆုံးလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နာကျင်နေတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာ ဟာ ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေတော့မှာပါပဲ။
အကျဉ်းချုပ်ရရင် အောက်ဆုံးအဆင့်” သောတာပန် ” တည်ပြီးသား အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အဲဒီ “နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့.. ဒုက္ခဝေဒနာ ” ကျော်လွှားတတ်ကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။ နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကို အထိုက်လျောက် ပျောက်နေအောင်ရှုတတ် တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေချည်းပါဘဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေ တို့ လည်း နာတဲ့ဝေဒနာ ကို ပျောက်နေအောင်ရှုတတ် တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ဖို့ ”ဝေဒနာ ကို ပျောက်အောင် ရှုမှတ်ပုံ ရှုမှတ်နည်း ” ဆိုတဲ့ ဤစာစု နဲ့ဓမ္မဒါန မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ရွှေဥမင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောကြားသောသြဝါဒများ ၊ ပြည် ဝိဇ္ဇောဒယ (သဲအင်း) ဆရာတော်ကြီး ဦးသီရိဓမ္မ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ နှင့် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ -ဝေဒနာရှုနည်းတရားတော် များမှ ကောက်နှုတ်၍ ဓမ္မဒါန ပြုပါသည်။
Credit : ခန္ဓာ-၅ပါးတစ်ဦး
ဝဒေနာကို ပြောကျအောငျ ရှုမှတျပုံ ရှုမှတျနညျး
” ဝဒေနာ ” အကွောငျးကို (၂ဝ၁၇ ဇနျနဝါရီလ ၊ ၂-ရကျ ) တုနျးကတော့.. ” ဝဒေနာကို မနာအောငျ ရှုနညျး “ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျ နဲ့ ရေးသားဖျေါပွခဲ့တဲ့အပွငျ၊ ” ဝိပဿနာနဲ့ ဆိုငျရာစာစုမြား ” ဆိုပွီး စာအုပျ ထုတျဝတေုနျးကလညျး ထညျ့သှငျးရေးသားဖျောပွခဲ့ဖူးပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့အပွငျ အခွားပွညျနယျတှကေ မွို့ တှကေို ဖွနျ့ ဖွူးထားပမေယျ့လညျး၊ တဈခြို့ ဝေးလံတဲ့ အရပျတှမှော၊ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ စာအုပျလကျဝယျ မရရှိသူတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အငျတာနကျ ဖစေ့ဘုတျက ဘာ အခကျအခဲ ဖွဈလဲဆိုရငျ ဖတျခငျြတဲ့ စာမကျြနှာ ကို ရှာဖှတေဲ့အခါ ရေးထားတဲ့ စာစုတှဟော အဟောငျးစာမကျြနှာ ဖွဈလလေေ၊ ရှာဖှရေတာ အခြိနျကွာလလေေ၊ ပွီးတော့..လောလောဆယျမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အငျတာနကျ ဆကျသှယျမှုတှဟော တဈခွားနိုငျငံက အငျတာနကျလို့မွနျဆနျမှု မရှိလောကျသေးတဲ့အတှကျ အခုလို ဖစေ့ဘုတျက စာမကျြနှာအဟောငျးကို ဖတျရှုတဲ့ အခါ မှာ ရှာဖှရေ ခကျခဲမှု ကို ပိုပွီးကွုံတှေ့ ကွရပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ စာအုပျလကျဝယျမရရှိဘဲ ပွနျဖတျခငျြတဲ့ ဓမ်မမိတျဆှေ တခြို့ ကလညျး အသဈပွနျတငျပေးဖို့ မေးလာတဲ့အပွငျ၊ အခုမှ စပွီး တရားအားထုတျမယျ့ ဓမ်မမိတျဆှတေို့အတှကျလညျး မဖွဈမနေ သိသငျ့သိထိုကျတာမို့ အရငျက ရေးသားဖျေါပွဖို့ ကနျြခဲ့တာလေးတှကေိုပါ နညျးနညျးဖွညျ့စှကျပွီး တရားစတငျအားထုတျကွတဲ့အခါ ဖွဈလာမယျ့၊ ကွုံတှေ့ လာမယျ့ ” ဝဒေနာ “ကို ပြောကျအောငျ ဘယျလို ရှုသငျ့တယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ” ဝဒေနာ.. ပြောကျအောငျ ရှုမှတျပုံ ရှုမှတျနညျး ” ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျ နဲ့ အသဈ ထပျမံရေးသားဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ခုမှစပွီး တရားထိုငျတော့မယျဆိုရငျ၊ တရားအားထုတျတော့မယျဆိုရငျ၊ လောလောဆယျမှာတော့..စိတျတှကေတော့ မငွိမျဘူး၊ တရားတှေ မတကျဘူး ဆိုတာတှထေကျ၊ အကငျြ့မရှိဘဲ နဲ့ ခုမှစပွီး တရားအားထုတျတဲ့သူကတော့ အရငျဆုံး မဖွဈမနေ ကွုံတှေ့ ရမှာက ” ဝဒေနာ “ပါ။
” ဝဒေနာ ” ဆိုတာ အလှယျဆုံးမှတျသားခငျြရငျတော့ ” ခံစားမှု ” လို့ ချေါပါတယျ။ ဘာတှေ ကို ခံစားကွတာလဲ ဆိုရငျ ကောငျးတာကို ခံစားခငျြတယျ။ မကောငျးတာကို မခံစားခငျြပမေယျ့ ခံစားရတယျ။ ” ကောငျးတာ နဲ့ မကောငျးတာ” ပေါ့။ တဈခြို့လညျး နားလညျသဘောပေါကျပွီးသား ဖွဈကွမှာပါ။ ပုထုဇဉျတို့ အနနေဲ့ အမြားစု က “နာကငျြ ကိုကျခဲ” မှ “ဝဒေနာ” ဆိုပွီး မှတျယူနကွေသူတှေ မြားပါတယျ။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့ ” ဝဒေနာ “အကွောငျးကို အရငျဆုံး အကွမျးဖငျြးရှငျးပွပါရစေ။
ဝဒေနာက (၃) မြိုးရှိပါတယျ။
၁။ ခံစားလို့ကောငျးတယျ၊ ကွိုကျတယျပေါ့ ၊ အဲဒီလို ခံသာတဲ့ “ဝဒေနာ”ကို “သုခဝဒေနာ”လို့ ချေါပါတယျ။
၂။ ခံစားလို့ မကောငျးဘူး၊ မကွိုကျဘူး ဆိုတဲ့ အဲဒီလို မခံသာတဲ့ “ဝဒေနာ” ကို “ဒုက်ခဝဒေနာ”လို့ ချေါပါတယျ။
၃။ ခံသာတာလဲမဟုတျဘူး၊ မခံသာတာလဲမဟုတျဘူး ဆိုတဲ့ ဝဒေနာ ကို “ဥပက်ေခာဝဒေနာ” လို့ ချေါပါတယျ။
နာတဲ့ ဝဒေနာ ကို ပြောကျနအေောငျ ဘယျလိုရှုမှာလဲဆိုပွီး ဖျေါပွမှာ ဖွဈလို့ အဲဒီ ” ဝဒေနာ” သုံးမြိုးထဲက ” ဒုက်ခဝဒေနာ ” အကွောငျးဘဲ လောလောဆယျ ပွောပါရစေ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အထကျမှာ ရေးပွသလို၊ တရားအားထုတျကွသူတိုငျး ကွုံတှေ့ ကွရတာ၊နာကငျြ ကိုကျခဲ တဲ့” ဝဒေနာ” ပါ။ နာကငျြ ကိုကျခဲတာ ကို အမြားစုက ကွိုကျမှ မကွိုကျကွတာကိုး။ ဒီဝဒေနာ က ပိုပွီး သိသားလှနျးတဲ့အတှကျ ဓမ်မမိတျဆှေ တို့ ဟာ “ဝဒေနာ” လို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ အဲဒီ “ဒုက်ခဝဒေနာ” ကွီး ကို ပွေးပွေးမွငျနကွေပါတယျ၊ တရားအားထုတျတဲ့ အခါ အဲဒီဝဒေနာ ပျေါလာမှာ ကို စိုးရိမျကွပါတယျ၊ ခန်ဓာ ရှိသ၍ “ဝဒေနာ” က ပျေါတာ ဓမ်မတာတရားပါ။
မိမိတို့ ကိုးကှယျနတေဲ့ မွတျစှာဘုရားရှငျ ကိုယျတျောတိုငျတောငျ ပြောကျအောငျ မလုပျပေးနိုငျပါဘူး။ ကုသပေး၊လုပျပေးနိုငျတာ မွတျစှာဘုရားရှငျကိုယျတိုငျ ရှာတှေ့ ထားတဲ့ မှနျကနျတဲ့ “ဗုဒ်ဓတရားတျော” တှကေသာ အဲဒီ ” ဝဒေနာ ” ကို ကုစား ပေးနိုငျတာပါ။
“ဝဒေနာ လာသေးလား ” ” ဝဒေနာခြုပျသှားပွီလား”၊ “ဝဒေနာ” ၊”ဝဒေနာ”ဆိုတဲ့ ဒီစကား ကို တရားအား ထုတျဖူးသူတိုငျး တရားစခနျးတိုငျးမှာ ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ အခငျြးခငျြး တရားဆှေးနှေးကွတဲ့ အခါ မှာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ တရားနာကွားတဲ့ အခါတှမှောပဲ ဖွဈဖွဈ အမွဲကွားရတဲ့ စကားလုံးဖွဈနပေါတယျ။ နာကငျြတာကို ပဲ “ဝဒေနာ” လို သတျမှတျကွတာကိုလညျး အပွဈလို့ မပွောလိုပါဘူး၊ ခုနပွောသလို နာကငျြတာက ထငျရှားနတောကိုး။
တဈခြို့ က ” ကနြျောဗြာ.. နေ့ တိုငျး ( ၁ )နာရီ အခြိနျမှနျမှနျ မကှကျမပကျြတရားအားထုတျဖွဈပါတယျ။အခုဆို ကနြေျာ့မှာ ဝဒေနာ ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး” တဲ့။ တဈခြို့ ကပြွနျတော့လညျး “ကြှနျမ ဝဒေနာ ခြုပျသှားပွီ။ အရငျက တရားထိုငျခါစမှာ အရမျးကိုသခေငျြလောကျအောငျ နာပါတယျ။ ဝဒေနာ ပျေါလာလို့ မှတျရငျးမှတျရငျး နဲ့ အခု ဆို တရားထိုငျတိုငျး အဲဒီဝဒေနာ မလာတော့ဘူး”..တဲ့..၊ “ဝဒေနာခြုပျ” သှားပွီတဲ့။
ဒီလိုရှိပါတယျ ဥပမာအနနေဲ့ ပွောရရငျ လူတဈယောကျဟာ အပွေးလကေ့ငျြ့တယျ ဆိုကွပါစို့။ လကေ့ငျြ့ခါစမှာတော့ အလကေ့ငျြ့မရှိယငျ ( ၁ဝ )မိနဈလောကျ ပွေးရငျ လညျး မောပါတယျ၊ အမောမခံနိုငျပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ နေ့ တိုငျး ပုံမှနျ လကေ့ငျြ့လာတဲ့ အခါ ကွာလာတော့ ( ၁ )နာရီ၊( ၂ )နာရီကွာ ပွေးရငျတောငျ မှ အမောခံနိုငျလာတာကို တှေ့ ရမှာပါ။ ဒါက ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ “အလအေ့ကငျြ့”ပါ။ ဒီလိုပါဘဲ တရားထိုငျခါစ မှာ အလကေ့ငျြ့ မရှိတော့ နာလာ၊ကိုကျခဲလာတယျ ဆိုတာ မဆနျးပါဘူး။ ဆနျးတယျ ဆိုတာက အဲဒီ နာတာကိုကျခဲတာ ကို ရှုနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ “ဝိပဿနာဉာဏျ”ဘဲ။ ယောဂီ အနနေဲ့ ခုလို နစေ့ဉျ ( ၁ )နာရီ၊ (၂ )နာရီ ပုံမှနျ တရားထိုငျလို့ ” ဝဒေနာ ” မလာတော့ဘူးဆိုတာ မဆနျးပါဘူး။ဒါ အကငျြ့ဖွဈသှားပွီကိုး။ မနာတော့ဘူး ဆိုရငျ..ထိုငျနကြေ အခြိနျထကျ နညျးနညျး လောကျ အခြိနျပိုပွီးထိုငျကွညျ့တဲ့အခါ..ပွငျးထနျတဲ့ နာကငျြတဲ့ ဝဒေနာတှဟော ထပျပွီးပျေါလာပါမယျ ဆိုတာ တှေ့ ရပါလိမျ့မယျ။
ခန်ဓာ ရှိရငျ “ဝဒေနာ”ဆိုတာ ရှိပါတယျ။ ဝိပဿနာဉာဏျ အားမပွညျ့သေးဘဲနဲ့ဟိုတှေးဒီတှေး နဲ့ အတှေးခြျောနမှော စိုးလို့ သတိပေးရတာ ဖွဈပါတယျ။ ” ဝဒေနာ” ရှိတာကို သိနရေပါမယျ။ အဲဒီပျေါလာတဲ့ ဝဒေနာ ကို ကိုယျ့အနနေဲ့ ခံနိုငျအောငျ ရှုနိုငျတာကမှ ” ဝဒေနာကို နိုငျတယျ ချေါတာ ဝဒေနာခြုပျတယျ” လို့ ချေါတာပါ။ တဈနေ့ လုံး မထဘဲ ထိုငျကွညျ့လိုကျပါ၊ အဲဒီ နာကငျြတဲ့ ဝဒေနာ ဟာ ပျေါလာလိုကျ၊ သူဟာသူပြောကျသှားလိုကျ အကွိမျပေါငျးမြားစှာဖွဈပကျြနမေယျဆိုတာ သိလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါ သဘာဝတရားပါ ကိုယျလုပျယူနတော မဟုတျပါဘူး။
၁။ ဝဒေနာကို ပြောကျသှားအောငျ ဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြ နဲ့ ရှုတာရယျ၊
၂။ ဝဒေနာကို အပွုတျတိုကျမယျ ဆိုတဲ့ စိတျကွမျးကွီး နဲ့ ရှုတာရယျ၊
၃။ ဝဒေနာကို သိအောငျ ရှုတာရယျ ဆိုပွီးရှိပါတယျ။
ပထမနညျး နဲ့ ဒုတိယနညျးက ….. ပယျရမယျ့နညျးပါ။
ဝဒေနာကို ပြောကျခငျြတဲ့ စိတျနဲ့ မရှုပါနဲ့။ သူမြားတှေ ဝဒေနာ ကြျောသှားတယျ၊ ပြောကျသှားတယျဆိုရငျ ကိုယျလညျး ပြောကျခငျြ၊ ခြုပျခငျြတယျ။ အဲဒီစိတျနဲ့ရှုရငျ မှတျခကျြတိုငျးမှာ ဝဒေနာပြောကျခငျြတဲ့ “လောဘ” ပါနတေယျ။ ဒီ ဝဒေနာ ပြောကျခငျြစိတျကွီး နဲ့ ရှုနတေော့ လောဘ ဖွဈနမှောပါပဲ။ တခြို့ကတြော့လညျး ဒေါသ သမားက ရှိပါသေးတယျ။ ဒီလောကျတောငျ နာတဲ့ဟာ ကို အပွုတျတိုကျမယျ ဆိုတဲ့ဒေါသကွီး နဲ့ ပေါ့ဗြာ။ အဲဒီဒေါသကွီး နဲ့ လညျး ရှုမှတျလို့ မဖွဈပါဘူး။ ဝိပဿနာ ရှုတယျ ဆိုတာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကုနျအောငျ၊ ပါးအောငျ လုပျတာ ဖွဈပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ လောဘ၊ ဒေါသကွီး နဲ့ ရှုရငျတော့ ရှုနညျးမှားပါတယျ လို့ ပဲ ဆိုရမှာပါ။
အဲဒါကွောငျ့ “ပြောကျခငျြတဲ့..စိတျကွီးနဲ့ မရှုပါနဲ့” တဲ့။ “အပွုတျတိုကျမယျ ဆိုတဲ့ စိတျကွီးနဲ့ မရှုပါနဲ”တဲ့။ ဘယျလိုနညျးနဲ့ “ရှုမှတျ”ရမလဲဆိုရငျ ဝဒေနာကို ” သိအောငျ “ရှုရပါမယျ။ ” ဝိပဿနာ ” ဆိုတာ “ ရုပျတှေ နာမျတှရေဲ့သဘော ” ကိုသိအောငျလုပျတာပါ။ လှုပျရှားနတောတှေ၊ မာတာ ပြော့တာတှေ၊ ပူတာအေးတာတှကေ “ရုပျတရား “။ အခုခံစားနရေတဲ့ ဝဒေနာတှကေနာမျတရားတှေ။ အဲဒီ နာမျတရားဖွဈတဲ့ ဝဒေနာ တို့ ၊စိတျတို့ရဲ့သဘောကို ဝိပဿနာဉာဏျ နဲ့ ရှုမှတျနရေတာပါ။
” ခမျြးမွေ့ ဆရာတျောဘုရားကွီး ” ဟောကွားတဲ့ ဝဒေနာရှုတာကို ( ၃ ) မြိုးခှဲပွီး
၂။ ရနျသူကို ခြုံခို တိုကျခိုကျနညျး။
၃။ ရနျသူကို အခြော့သတျနညျး..ဆိုပွီး ဟောထားတာရှိပါတယျ။
*လူငယျ ၊ လူရှယျ တှေ အသကျငယျပွီး ကနျြးမာရေးကောငျးတဲ့ လူတှေ အတှကျ ကတော့” ရငျဆိုငျတိုကျခိုကျနညျး “က ကောငျးပါတယျ။
*ရောဂါရှိတဲ့သူ၊ ဥပမာ-နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူ ဆိုရငျ ခြုံခိုတိုကျခိုကျနညျးကကောငျးပါတယျ။ “ ခြုံခိုတိုကျခိုကျနညျး” က ကိုယျ့ရဲ့ ကမ်မဋ်ဌာနျး ကို မြားမြားမှတျပွီး၊ နောကျမှ…ဝဒေနာ ကို ပွနျရှုတာ။ ဒါက “ ခြုံခိုတိုကျခိုကျနညျး”ပါ။
*အငျမတနျအသကျကွီးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ ကတော့ မှတျနကြေ ပငျတိုငျကမ်မဋ်ဌာနျး ကို အကွာကွီး မှတျ၊ မခံမရပျနိုငျ နာကငျြလာရငျ ၊ထိုငျတဲ့ ပုံစံလေး ကို အသာလေးပွငျ နောကျမှ ဝဒေနာကိုရှု။ အဲ့ဒါ…”အခြော့သတျနညျး”ပေါ့။
“ရငျဆိုငျတိုကျခိုကျနညျး” ဆိုတာ ဝဒေနာ အပျေါစိတျကိုတညျ့တညျ့မှတျမှတျထားပွီး၊ နာတဲ့အပျေါ စိတျကိုတညျ့တညျ့ထားပွီး “ထိုငျတယျ၊ ထိတယျ၊ နာတယျ”…. “ထိုငျတယျ၊ ထိတယျ၊ နာတယျ”-လို့ စူးစူးစိုကျစိုကျမှတျ။နာတာ ကဉျြတာတှကေို စိတျရှညျရှညျနဲ့သညျးညညျးခံပွီး မှတျတာပါ။ ပျေါလာတဲ့ ဝဒေနာတှကေ ဒုက်ခသစ်စာ။ ဖွဈတဲ့အတိုငျးမှတျနတောက မဂ်ဂသစ်စာ။ အပါယျလေးပါးမကအြောငျလို့ဒုက်ခသစ်စာ ကိုသိဖို့ အတှကျ ဝဒေနာ ကို ရှုမှတျတာ က ပိုပွီးထိရောကျနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။
“ဝဒေနာ၊သတိ” ဆိုတာ နာရငျ နာတယျလို့မှတျတာ။အဲဒီလို နာတာကို မှတျနရေငျး ” သတိ “က အားကောငျးလာပွီး ” ဝဒေနာ၊ သမာဓိ “ဖွဈလာပါတယျ။ အဲဒီ ဝဒေနာနဲ့သမာဓိ ဘောငျခြိနျလိုကျရငျ “ပညာ”ပျေါလာပါတယျ။ ” ဒုက်ခဝဒေနာ “ကို ကြျောလှနျအောငျ မမှတျနိုငျလို့ရှိရငျတော့ ၊ တရားထူးရဖို့တျောတျောလေး ကငျြ့ယူရမှာဖွဈပါတယျ။ ရငျဆိုငျတိုကျခိုကျနညျးတော့…. မွနျမွနျဆနျဆနျ တရားသဘောတှေ မွနျမွနျ ပိုသိနိုငျတာပေါ့..နျော။ အဓိက က .. နာလာတဲ့ ဝဒေနာ ကို သဘောပေါကျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့“ရောဂါ ကွောငျ့ နာတာလား ၊ ဝဒေနာ” ကွောငျ့ နာတာလား ဆိုတာကို ကှဲပွားအောငျ ကွညျ့ရပါမယျ။ ကိုယျထဲမှာ “နာတာ၊ ကငျြတာ၊ ကိုကျတာ၊ ခဲတာ” အဲဒါက ” ရောဂါ ” ပါ။ အဲဒီ ကိုယျ့ အနာရောဂါ ကို အကွောငျးပွုပွီးတော့ စိတျထဲမှာ မခံသာတာ ကတော့ “ဝဒေနာ(ခံစားခကျြ)” ဖွဈပါတယျ။အဲဒီဖောကျပွနျတဲ့ ရောဂါကိုဘဲ”နာလှခြေ” ရဲ့ ဆိုပွီး ကွညျ့နရေငျ သိပျအခံရ ခကျပါတယျ။ “စိတျ “ထဲ မှာ ရှိနတေဲ့ အဲဒီ “မခံသာတဲ့” ဝဒေနာ( ခံစားခကျြ )ကို ကွညျ့ပေးပါ။ “မခံသာတဲ့ ဝဒေနာ”က သပျသပျ။ “ရောဂါ”က သပျသပျ…ဆိုတာ မွငျလာပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီ မခံသာတဲ့စိတျ ကို ရှုကွညျ့နလေိုကျ ရငျ တော့ “ကိုယျမှာနာနတော” ဟာ မဆိုငျတော့ဘူး.. ဆိုတာ မွငျလာပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာ သူမြားဖွဈတာလေး ကို ကွညျ့နရေသလို၊ ဆရာဝနျက လူမမာ ကို ကွညျ့နရေသလိုပါပဲ ကိုယျပါရောပွီး မနာတော့ပါဘူး။ ကိုယျနာတာခညျြး သှားကွညျ့နရေငျ ကိုယျရောစိတျပါ ရောပွီးနာသှားပါလိမျ့မယျ။ “မခံနိုငျဘူး။ ပွငျခငျြတယျ။ ပွောငျးခငျြတယျ” အဲဒီ စိတျကလေးဖွဈလာရငျလညျး..အဲဒီဖွဈတဲ့ စိတျ ကို “သိ” နပေေးပါ။ ပြောကျခငျြစိတျ ဖွဈနရေငျလညျး အဲဒီ”စိတျကလေး”ကို ဘဲ သတိထားပွီး ကွညျ့ပေးပါ။ မကနြေပျစိတျဖွဈရငျလညျး ကွညျ့ပေး၊ သိပေးပါ။
ဥပမာ တဈခုထပျပေးရရငျတော့ မီးဖိုပျေါမှာ တညျထားတဲ့ ဟငျးခြိုအိုး က ဟငျးခြို ကို “အပေါ့ အငနျ” ကို မွညျးသလိုပါဘဲ။ အဲဒီလို “အပေါ့ အငနျ” ကို မွညျးတဲ့ အခါမှာ မီးဖိုပျေါမှာ ရှိတဲ့ ဟငျးခြိုအိုး ပှကျပှကျဆူနတောကို ပူမှနျး သိလကျြ….ဇှနျး နဲ့ ခပျပွီး မွညျးကွတယျ…မဟုတျလား။ ဘာလို့ ပူမှနျး သိသလဲ ဆိုတော့ မှုတျပွီး သောကျကတညျး က “ပူမှနျး” သိလို့ ပါ။ အဲဒီလို ဟငျးရညျအပူကွီး ပါးစပျထဲကို ရောကျတဲ့အခါ “ပူတာကို အာရုံပွုကွ တာလား” “အပေါ့..အငနျ ကို အာရုံပွုကွ တာလား” ဓမ်မမိတျဆှတေို့အနနေဲ့ ..”ပူတာကို သတိမထားကွပါဘူး ဂရုမစိုကျပါကွဘူးနျော။ “အပေါ့အငနျ”ကိုပဲ သတိထား ကွပါတယျ။ “အပေါ့အငနျ”ကိုပဲ အကဲခတျ ကွပါတယျ။
အဲဒီဥပမာ တှလေို ပုထုဇဉျတှဟော အမြားအားဖွငျ့ နာတာ၊ကငျြတာကွီး ကို ဂရုစိုကျ၊ ကိုကျတာ၊ခဲတာကွီး ဂရုစိုကျနကွေတာဘဲ မြားကွပါတယျ။ အဲဒါတှကေို ဂရုမစိုကျပါ နဲ့။ “အပေါ့အငနျ”နဲ့ တူတဲ့ ” မခံခငျြတာကို ခံစားနရေတဲ့ စိတျ ” ကလေးကို သာ ဂရုစိုကျရပါမယျ။ နာကငျြတဲ့..အပျေါမှာ ခံစားတယျ၊ ကိုကျခဲနတေဲ့ အပျေါမှာ ခံစားတယျ။ ခံစားတာ “ဝဒေနာ” ကိုး။ အဲဒီ” ဝဒေနာ” အပေါ့အငနျ ကိုသာ ကိုယျက အကဲခတျ ဖမျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီလို မဖမျးဘဲ နဲ့ အပေါ့ အငနျ နဲ့၊ ငါ နဲ့ ပေါငျးပွီးတော့ ပူတာကွီး အာရုံပွုပွီး၊ ဒီပူတာကွီးကို ကွောကျနတေယျဆိုရငျတော့ ဟငျးခြို ” အရသာ ” ကို မသိတော့ဘဲ ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ ဟငျးခြို ကို အရသာ မွညျး သလို…ပူတာ ကို ဂရုမစိုကျရပါဘူး။ အပေါ့အငနျ ကို ဂရုစိုကျရပါတယျ။ နာကငျြ၊ ကိုကျခဲတာကွီး ပျေါလာတယျ။ ပျေါလာတဲ့ နာကငျြ၊ ကိုကျခဲတာ ကို “ပဓာန” မထားပါနဲ့။ “ သာမည ” ထားပါ။
အဓိက က ဘယျသူလဲ၊ နာကငျြ၊ ကိုကျခဲတာ အပျေါမှာ မခံခငျြတာ ခံစားနရေတာ။ အဲဒီ ခံစား နရေတဲ့ “သဘော” ကသာ… “အဓိက” ဖွဈပါတယျ။ နာကငျြ၊ ကိုကျခဲတာဟာ “သာမည ” ပါ။ ဓမ်မမိတျဆှတေို့ ” ဝဒေနာ” ခံစားတဲ့ သဘောကို ရှုခငျြ ရငျ “ ဟငျးရညျ မွညျးသလိုပဲ ” ရှုတာဟာ အဆငျပွဆေုံးလို့ ယူဆမိပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ နာကငျြနတေဲ့ ဒုက်ခဝဒေနာ ဟာ ဘယျရောကျနမှေနျးမသိ ပြောကျခကျြသား ကောငျးနတေော့မှာပါပဲ။
အကဉျြးခြုပျရရငျ အောကျဆုံးအဆငျ့” သောတာပနျ ” တညျပွီးသား အရိယာပုဂ်ဂိုလျကတော့ အဲဒီ “နာကငျြကိုကျခဲတဲ့.. ဒုက်ခဝဒေနာ ” ကြျောလှားတတျကွတဲ့ သူတှခေညျြးပါပဲ။ နာကငျြတဲ့ဝဒေနာကို အထိုကျလြောကျ ပြောကျနအေောငျရှုတတျ တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှခေညျြးပါဘဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဓမ်မမိတျဆှေ တို့ လညျး နာတဲ့ဝဒေနာ ကို ပြောကျနအေောငျရှုတတျ တဲ့ သူတှေ ဖွဈဖို့ ”ဝဒေနာ ကို ပြောကျအောငျ ရှုမှတျပုံ ရှုမှတျနညျး ” ဆိုတဲ့ ဤစာစု နဲ့ဓမ်မဒါန မြှဝလေိုကျပါတယျ။
ရှဥေမငျဆရာတျော ဘုရားကွီး ဟောကွားသောသွဝါဒမြား ၊ ပွညျ ဝိဇ်ဇောဒယ (သဲအငျး) ဆရာတျောကွီး ဦးသီရိဓမ်မ ဟောကွားတျောမူသော တရားတျောမြား နှငျ့ မွစိမျးတောငျဆရာတျောကွီး ရဲ့ -ဝဒေနာရှုနညျးတရားတျော မြားမှ ကောကျနှုတျ၍ ဓမ်မဒါန ပွုပါသညျ။
Credit : ခန်ဓာ-၅ပါးတဈဦး